Ukudonswa kwamagetsi emaphandleni kuyaqhubeka | uMthunywa
Ukudonswa kwamagetsi emaphandleni kuyaqhubeka
23 Sep, 2021 - 00:09 2021-09-22T20:58:31+00:00 2021-09-23T00:07:23+00:00 0 Views
Mnumzana Johannes Nyamayedenga
UHLANGOTHI olubona ngezamandla kagetsi, olwe-Rural Electrification Agency (REA) lubika ukuba seludonse, lwafaka amandla kagetsi kundawo zomphakathi ezedlula i-10 000 kuzo zonke izabelo.
I-Rural Electrification Agency ingaphansi kukaHulumende kugatsha lwezamandla kagetsi njalo ilomlandu wokudonsa amagetsi emaphandleni wonke.
Phakathi kwendawo lezi esezilamandla kagetsi ngenxa ye-REA, kulezikolo, amahofisi kaHulumende, izibhedlela lamakilinika, amaphurojekithi okulima ngokuthelezela eziqintini ezitshiyeneyo emaphandleni.
Ekhuluma lentatheli yephephandaba likazulu embukisweni we-Zimbabwe International Trade Fair (ZITF) ngoLwesibili emini, uMnumzana Johannes Nyamayedenga, oyisikhulumi se-REA uthe sebedonse amandla kagetsi kundawo ezibalisa izikolo, amakilinika lamahofisi kaHulumende ayedlula i-10 000 kuzo zonke izabelo.
“Ukuza kulumbukiso we-ZITF kuzakuba lesitshengiselo sokuthi iRural Electrification Agency, eyaziwa njalo ngokuthi yi-Rural Electrification Fund, isisekele umbono kaHulumende wokudonsa amagetsi endaweni ezisetshenziswa ngumphakathi. Sikhuluma nje sesifake amagetsi endaweni ezedlula i-10 000 njalo siyaphambili, asibuyeli emuva,” kutsho uMnu Nyamayedenga.
“Silapha koBulawayo, kumbukiso weTrade Fair ukuzokhuthaza abantu bakithi, ikakhulu labo abasemaphandleni ukuthi baze kithi bekhululekile bacetshiswe ngabangakwenza ukuthi bathole amagetsi.
“Ugatsha lwe-REA lujonge ukuthuthukisa isizwe ngokuletha amagetsi emaphandleni. UHulumende ufuna amagetsi afinyelele wonke umuntu, kungakho-ke i-REA layo izakusekela lokhu ngokwenza umsebenzi wayo.”
UMnu Nyamayedenga uthe ngaphandle kokudonsa amagetsi, uhlangothi lwabo selugxile ekukhuthazeni uzulu ukuthi asebenzise i-solar le-biogas.
“Siyazi ukuthi sonke lesi isikhathi besiqina ngokuthi sidonse amagetsi la avela ekuphekeni amalahle lalawo avela emanzini.
Kodwa, ngenxa yokutshintsha kwezinto lokukhankasela ukunakelela imvelo, iREA isigxile njalo lasekufundiseni abantu ukuthi basebenzise amandla elanga, lokhu esikubiza ngokuthi yi-solar energy, kanye lokusebenzisa i-biogas. Kulumbukiso we-ZITF yalonyaka, sizacebisa uzulu ngenhlelo ezifana lalezi.